၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ မြန်မာအသင်း ဂျပန်နှင့်တအုပ်စုထဲကျ - The Lifestyle Myanmar
Home News Sports News ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ မြန်မာအသင်း ဂျပန်နှင့်တအုပ်စုထဲကျ
၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ မြန်မာအသင်း ဂျပန်နှင့်တအုပ်စုထဲကျ
၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ ဒုတိယအဆင့်အတွင် မဲနှိုင်အုပ်စုခွဲပွဲကို မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ AFC ရုံးချုပ်တွင် ဇူလိုင် ၁၇ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
မြန်မာအသင်းသည် ဖီဖာဘောလုံးအဆင့်သတ်မှတ်မှုဇယားတွင် နေရာကောင်းရရှိနေခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးအဖြစ် ပထမအဆင့် ခြေစစစ်ပွဲများကို ကစားစရာမလိုအပ်ဘဲ ဒုတိယအဆင့်မှစတင် ခြေစစ်ပွဲဝင်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။
ဖီဖာ၏ဘောလုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ အဆင့် ၁၃၈ တွင်နေရာယူထားသော မြန်မာအသင်းသည် မဲပုံး (၄) တွင် ကျရောက်ပြီး မိမိတို့ထက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မြင့်မားသော အသင်း ၄ သင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာအသင်းသည် အုပ်စု (F) တွင် ဂျပန်၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ ကာဂျစ်တို့နှင့် အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းစနစ်ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်ပြီး ရမှတ်အများဆုံး ၂ သင်းသည် တတိယအဆင့် ခြေစစ်ပွဲသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရမှတ်အများဆုံး ၂ သင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိပါက Asian Continental Cup တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ ဒုတိယအဆင့် အုပ်စု (F) ပွဲစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1. September 5, 2019 – Mongolia vs Myanmar
2. September 10, 2019 –Myanmar vs Japan
3. October 10, 2019 – Kyrgyz Republic vs Myanmar
4. November 14, 2019 – Myanmar vs Tajikistan
5. November 19, 2019 – Myanmar vs Mongolia
6. March 26, 2020 – Japan vs Myanmar
7. March 31, 2020 – Myanmar vs Kyrgyz Republic
8. June 9, 2020 – Tajikistan vs Myanmar
အဆိုပါ ခြေစစ် ပွဲစဉ်များတွင် ဖီဖာအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များအရ တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရ ၃၄ သင်း၊ ပထမအဆင့် ခြေစစ်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ပြီးမှ တက်ရောက်လာသည့် အသင်း(၆) သင်း စုစုပေါင်းအသင်း ၄၀ ယှဉ်ပြိုင်ကစားမည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ အဆင့်ပွဲစဉ်များကို အသင်း(၅) သင်းပါဝင်သည့် အုပ်စု (၈) အုပ်စု ယှဉ်ပြိုင်ကစား စေမည်ဖြစ်ပြီး ထိပ်ဆုံး (၈) သင်းနှင့် အကောင်းဆုံး ဒုတိယ (၄)သင်းမှာ ကမ္ဘာ့ဖလား တတိယအဆင့် ခြေစစ်ပွဲသို့ တက်ရောက်ခွင့် ရမည်ဖြစ်ပြီး အာရှဖလား ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျန် ဒုတိယနေရာရ (၄) သင်း၊ တတိယနေရာရ(၈) သင်းနှင့် အကောင်းဆုံး စတုတ္ထနေရာရ (၄)သင်းမှာ၂၀၂၃ အာရှဖလား တတိယ အဆင့် ခြေစစ်ပွဲစဉ်သို့ တက်ရောက်ခွင့် ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျန် စတုတ္ထနေရာရ (၄)သင်းနှင့် အုပ်စုအောက်ဆုံး (၈)သင်းမှာ ၂၀၂၃ အာရှဖလား Play – off ခြေစစ်ပွဲ ထပ်မံကစားရမည်ဖြစ်သည်။
Source: MFF & News Watch
၂၀၂၂ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲ ဒုတိယအဆငျ့အတှငျ မဲနှိုငျအုပျစုခှဲပှဲကို မလေးရှားနိုငျငံ ကှာလာလမျပူမွို့ရှိ AFC ရုံးခြုပျတှငျ ဇူလိုငျ ၁၇ ရကျတှငျ ကငျြးပပွုလုပျသညျ။
မွနျမာအသငျးသညျ ဖီဖာဘောလုံးအဆငျ့သတျမှတျမှုဇယားတှငျ နရောကောငျးရရှိနခွေငျး၏ အကြိုးကြေးဇူးအဖွဈ ပထမအဆငျ့ ခွစေစဈပှဲမြားကို ကစားစရာမလိုအပျဘဲ ဒုတိယအဆငျ့မှစတငျ ခွစေဈပှဲဝငျခှငျ့ ရရှိခဲ့သညျ။
ဖီဖာ၏ဘောလုံးအဆငျ့သတျမှတျခကျြအရ အဆငျ့ ၁၃၈ တှငျနရောယူထားသော မွနျမာအသငျးသညျ မဲပုံး (၄) တှငျ ကရြောကျပွီး မိမိတို့ထကျ အဆငျ့သတျမှတျခကျြ မွငျ့မားသော အသငျး ၄ သငျးနှငျ့ ယှဉျပွိုငျကစားရမညျဖွဈသညျ။
မွနျမာအသငျးသညျ အုပျစု (F) တှငျ ဂပြနျ၊ မှနျဂိုလီးယား၊ တာဂဈြကစ်စတနျ၊ ကာဂဈြတို့နှငျ့ အိမျကှငျးအဝေးကှငျးစနဈဖွငျ့ ယှဉျပွိုငျကစားရမညျဖွဈပွီး ရမှတျအမြားဆုံး ၂ သငျးသညျ တတိယအဆငျ့ ခွစေဈပှဲသို့ တကျရောကျခှငျ့ရရှိမညျဖွဈသညျ။ ရမှတျအမြားဆုံး ၂ သငျးတှငျပါဝငျခွငျးမရှိပါက Asian Continental Cup တှငျ ပါဝငျယှဉျပွုငျရမညျဖွဈသညျ။
၂၀၂၂ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲ ဒုတိယအဆငျ့ အုပျစု (F) ပှဲစဉျမြားမှာ အောကျပါအတိုငျးဖွဈသညျ။
အဆိုပါ ခွစေဈ ပှဲစဉျမြားတှငျ ဖီဖာအဆငျ့ သတျမှတျခကျြမြားအရ တိုကျရိုကျယှဉျပွိုငျခှငျ့ရ ၃၄ သငျး၊ ပထမအဆငျ့ ခွစေဈပှဲ ယှဉျပွိုငျပွီးမှ တကျရောကျလာသညျ့ အသငျး(၆) သငျး စုစုပေါငျးအသငျး ၄၀ ယှဉျပွိုငျကစားမညျဖွဈသညျ။
ဒုတိယ အဆငျ့ပှဲစဉျမြားကို အသငျး(၅) သငျးပါဝငျသညျ့ အုပျစု (၈) အုပျစု ယှဉျပွိုငျကစား စမေညျဖွဈပွီး ထိပျဆုံး (၈) သငျးနှငျ့ အကောငျးဆုံး ဒုတိယ (၄)သငျးမှာ ကမ်ဘာ့ဖလား တတိယအဆငျ့ ခွစေဈပှဲသို့ တကျရောကျခှငျ့ ရမညျဖွဈပွီး အာရှဖလား ခွစေဈပှဲအောငျမွငျမညျဖွဈသညျ။
ကနျြ ဒုတိယနရောရ (၄) သငျး၊ တတိယနရောရ(၈) သငျးနှငျ့ အကောငျးဆုံး စတုတ်ထနရောရ (၄)သငျးမှာ၂၀၂၃ အာရှဖလား တတိယ အဆငျ့ ခွစေဈပှဲစဉျသို့ တကျရောကျခှငျ့ ရမညျဖွဈသညျ။ ကနျြ စတုတ်ထနရောရ (၄)သငျးနှငျ့ အုပျစုအောကျဆုံး (၈)သငျးမှာ ၂၀၂၃ အာရှဖလား Play – off ခွစေဈပှဲ ထပျမံကစားရမညျဖွဈသညျ။
Previous articleရဲတပ်ဖွဲ့ကို ကယ်တင်ပေးပါ ( ဟာသ )
Next articleမွေးနေ့မှာ အဖေ့ကို သိန်း ၁၀၀၀ ပုံပြီးကန်တော့တဲ့ အထူးကုဆရာဝန်လေး
ဖိလဈပိုငျရောကျရောကျခငျြး အဆငျမပွမေူတှနေဲ့ ကွုံခဲ့ရတဲ့ မွနျမာနဲ့ အရှတေီ့မော ယူ၂၂ အသငျး